Warbaahin Xogreebnews oo Heeshay Warqad taabanaysaa Qulubta Muwaadiniinta S/land oo u Qoray Godka Lagu Jannee Madaxweyne Maxamed X. Ibraahin Cigaal, kuna Socotay Maayirka iyo Badhasaabkii Saaxil… Madaxweyne Cigaal Waxa uu Xaaran ka dhigay Guryo dawladu lahayd oo xiligiisi laga Iibiyey Ganacsade Baxsane, oo u Iibiyey Inaadeerkii Wali Daa'uud Cigaal…
Saturday February 10, 2018 - 04:47:10 in Wararka by Super Admin
Warbaahin Xogreebnews oo Heeshay Warqad taabanaysaa Qulubta Muwaadiniinta S/land oo u Qoray Godka Lagu Jannee Madaxweyne Maxamed X. Ibraahin Cigaal, kuna Socotay Maayirka iyo Badhasaabkii Saaxil… Madaxweyne Cigaal Waxa uu Xaaran ka dhigay Gury
Berbera(Xogreebnews)-Rabbi Naxariistii janno haka Waraabiye Madaxweynihii labaad ee Somaliland Marxuum Maxamed X. Ibraahin Cigaal, ayaa taarikhdu markii ay ahayd 1196-kii waxa uu warqad Madaxweyne u qoray maamulkii Gobolka Saaxil iyo kii degmada Berbera. Warqadaas Madaxweynuhuu wuxuu ku kala xadidey shaqada ay labadaas masuul ku kala maga-caaban yihiin ee ay qaranbka ku metelaan.
Madaxweyne Marxuum Cigaal waxa uu faray labadaas masuul ee gobolka Saaxil oo xilligaas cusbaa inay horumariyaan Magaaladda Berbera oo ku tilmaamay hal-bowlaha qaranka Somaliland, sidoo kale waxa uu furay inaanay isku xad-gudbin Maayirka iyo badhasaabku, si aanu u dhicin muran iyo khilaaf soo dhex-gala.
Geesta kale, Madaxweyne Marxuum Maxamed X. Ibraahin Cigaal waxa uu qoraalkiisa kaga murugooday guryo dawladdu lahayd oo la siiyey Nin ay Ilmaadeer yihiin oo aan lala socodsiin, Ninkaasoo lagu magacaabi jiray Weli Daa’uud Cigaal, sidoo kale Madaxweynuhuu wuxuu ku amray madaxda qaranka dhamaantood inaanay hantida qaranka qof qoyskiisa ah ku karaameyn, waxanu tallaabadaas ku tilmaamay mid sharaftiisa dhaawacaysaa oo isagga lagu xumaynaayo.
Madaxweyne Cigaal waxa uu tallaabo adag ka qaaday Guryihii sifaha khaldan lagu siiyey Ganacsade Baxsane ee u iibiyey inaadeerki, waxanu guryihii kusoo celiyey gacanta dawladda. Cajiib bal halkan hoose ka akhri Warqadan oo ay heshay Shabakadda Warbaahinta Xogreebnews.